09/06/2018 - Page 2 sur 4 -
Famonoana resevera teny Itaosy : Olona roa voasambotra
Folo andro aty aoriana, dia nahitana mangirana ny mahakasika ilay raharaha famonoana resevera ao amin’ny zotra 133 teny amin’ny fokontany Andravako, kaomina Ankadimanga Itaosy ny alatsinainy 28 mey lasa teo. Araka ny loharanom-baovao, dia olona …Tohiny
Toamasina : Nisy naka an-keriny i Nizar Pirbay
Mpandraharaha karana antsoina hoe Nizar Pirbay, lehiben’ny orinasa Business Center no nisy naka an-keriny manoloana ny trano fonenany tany Toamasina omaly tokony ho tamin’ny 06 ora sy sasany hariva. Mbola tsy nahazoam-baovao hatreto ny mahakasika …Tohiny
Navage Veldjee : Navotsotr’ireo mpaka an-keriny
Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny fianakaviamben’ny karana mizaka ny zom-pirenena frantsay eto Madagasikara na ny Cfoim, dia votsotra teny am-pelatanan’ireo jiolahy omaly i Navage Veldjee. Nijanona ho tsiambaratelo kosa ny takalon’izao famotsorana ity karana …Tohiny
Fiarovana ny tontolo iainana : Hampiharina ny fampiroboroboana ny fambolena any ambanivohitra
Afaka iray volana dia hanomboka ny asa ifotony hampiharana ny tetikasa Padap, na ny « projet agriculture durable par une approche paysage », tetikasa hampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana any ambanivohitra. Ity atrikasa ity dia miompana …Tohiny
Hanomboka anio, ary haharitra telo andro. Hanampy ireo olom-boafidy malagasy amin’ny fanatanterahana ny adidiny ny fihaonana an-tampony faharoan’ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana frantsay sy Madagasikara, na ny AICT (Assises de la Coopération International des Collectivités Malagasy et ...Tohiny